ITIL စာမေးပွဲ 2017 များအတွက်နမူနာမေးခွန်းနှင့်အဖြေများ - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
နမူနာမေးခွန်းနှင့် ITIL စာမေးပွဲများအတွက်အဖြေများ 2017
ITIL စာမေးပွဲ 2017 - နမူနာမေးခွန်းနှင့်အဖြေများ
ITIL အိုင်တီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့်အတူသည့်ဝန်ဆောင်မှုများညှိကြောင်းအိုင်တီဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အလေ့အကျင့်တစ်ခုအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ITIL ၏ rudiments သိမှတ်ကြလော့အသင်းအဖွဲ့များများအတွက်အရေးပါသည်ဤထုံးစံ၌တည်ရှိ၏။ ITIL အောင်လက်မှတ် ITIL နှင့်၎င်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှု၏ rudiments အတူကျွမ်းကျင်သူများက familiarizes ။ ဤတွင်စာမေးပွဲတချို့ဥပမာမေးခွန်းများနှင့်အဖြေကိုဖြစ်ကြသည်။
1 ။ ဘယ်လို ITIL ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချကူညီရန်နှင့် IT ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများများအတွက်အပိုင်၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကျဆင်းသနည်း?
ကြိုတင်ဘွတ်ကင်မရသောအလုပ်အတွက်စီစဉ်ပေးအလုပ်ကျော်လိုအပ်ရရှိအဖြစ်အိုင်တီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ဝန်ထမ်းများမိမိတို့၏အလုပ်အချိန်ဇယားကိုချိုးဖျက်။ ITIL ဒီသံသရာရပ်တန့်ဖို့အသင်းအဖွဲ့များဖွနဲ့အပိုင်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုသူတို့ရဲ့ဧရိယာ၌အခြားအလုပျ၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကိုယ်စားလှယ်များအာဏာ။
2 ။ တစ်ဦး ITIL လိုက်နာပြောင်းလဲမှုစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်အားအထဲမှာတစ်အဆိုပြုထားပြောင်းလဲမှု၏အမိန့်ကိုရှေးခယျြဖို့နိုင်စွမ်းကားအဘယ်သူနည်း
အဆိုပါရွေးချယ်မှုကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်း Manager ကိုယူသည်။ သူဟာလုပ်ငန်းများလုပ်သားဧည့်ခံခြင်းနှင့်အသုံးချတိုးချဲ့နေဖြင့်အဖြစ်ဝေးနိုင်သမျှများနှင့်အသုံးစရိတ်ကန့်သတ်မှုအဖြစ်အတွင်း၌မိမိတို့၏ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်အာမခံပါသည်။ သူကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စဉ်များမှစသောအပြောင်းအလဲအလုပ်အစိတ်အပိုင်းများ, မူဘောင်များနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်အသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် concentrates ။
3 ။ တစ်ဦးပြောင်းလဲခြင်းကွပ်မျက်ခံရလျက်ရှိသည်ပြီးနောက်ဖျော်ဖြေသည့်အကဲဖြတ်ဘယျလိုချေါသလဲ?
အဆိုပါအကဲဖြတ်ဟုခေါ်သည် Post ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရေးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (PIR)။ ဤသည်စုစုပေါင်းအလုပ်လုပ်ဖြေရှင်းချက်၏သုံးသပ်ချက်ကိုများနှင့်အကဲဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအကျိုးတူ၏ခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးအပြီးအချို့ကိစ္စများတွင်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပြေးပြီးနောက်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ မူဘောင်ဝန်းကျင်ခြောက်လများအတွက်ဖန်တီးမှုအခြေအနေခဲ့ပြီးနောက် PIR မူဘောင်တိုး၏လုံလောက်မှုအကဲဖြတ်ထားပါသည်။
4 ။ ITIL ၏အဘယျလုပ်ငန်းစဉ်အသင်းအဖွဲ့အသစ်နှင့်ဖြစ်ပေါ်နေသောဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် ပတ်သက်. သိတယ်သေချာ?
5 ။ ဒီလိုအပ်ချက်ဖို့ဝန်ဆောင်မှု Desk ရဲ့သဘောတူညီချက်သတင်းပို့ထားတဲ့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုအဆင့် Manager ကိုပြည်တွင်းရေးဝန်ဆောင်မှု Desk အတွက် 10 စက္ကန့်အတွင်း၌ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုအထူးသမှုနှုန်းနိုင်တော့မည်ပြန်ပြောဘယ်မှာအကြောင်းကိုကတိသစ္စာပြုရန်လိုအပ်သည်သောချွတ်အခွင့်အလမ်း, တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားကြလိမ့်မည်နည်း
အိုင်တီဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများတစ်ခုအစီအစဉ်သိရှိစေရန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအစီအစဉ်အတွက် bunches ဘယ်လိုထူးခြားတဲ့သရုပ်ဖော်ကြောင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဆငျ့သဘောတူညီချက် (Ola) အမည်ရှိသဘောတူညီချက်ကရှိတယ်။ ဒါဟာအိုင်တီများ၏အရေးကိစ္စများကိုဂရုစိုက်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်စံတစ်ခုအစီအစဉ်ညွှန်ပြခြင်းဖြင့် storehouses နှင့်အိုင်တီတိုင်းရုံးကဖျော်ဖြေခံရဖို့သည့်ဝန်ဆောင်မှုများ။
6 ။ ဘယ်နှစ်ခု Service ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာများနှင့်အန္တရာယ်စာမေးပွဲအသုံးချ?
7 ။ စည်းကမ်းချက်များဝန်ဆောင်မှုအစုစုကို, ဝန်ဆောင်မှုစာရင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပိုက်လိုင်းရှင်းလင်း။
ဝန်ဆောင်မှုအစုစု: ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောစျေးကွက်နှင့် client များကျော် crosswise ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ကမ်းလှမ်းန်ဆောင်မှုရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့။ Service ကို Portfolio စီမံခန့်ခွဲမှုန်ဆောင်မှုအစုစုနှင့်အတူဆကျဆံ။ ဒါဟာဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ထင်ကြေး၏တရားဝင်အဆင့်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရလဒ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့န်ဆောင်မှုရှိပါတယ်အာမခံပါသည်။
Service ကိုအညွှန်းကိန်း: ဤဝန်ဆောင်မှုအစုစု၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ clients များကမ်းလှမ်းခံရဖို့ပြင်ဆင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အိုင်တီဝန်ဆောင်မှုညွှန်းကိန်းတစ်ခုအသင်းအဖွဲ့များ၏လက်လှမ်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပူဇော်သက္ကာများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
Service ကိုပိုက်လိုင်း: ဒါဟာအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ခံရန်ဆောင်မှုများထည့်သွင်း။ ဒါဟာအားဖြင့်၎င်း, ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ခံရသဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းအနာဂတ်မှာန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
8 ။ CMIS, Amis နှင့် KEDB ရှင်းလင်း။
စွမ်းဆောင်ရည်စီမံခန့်ခွဲမှုသတင်းအချက်အလက်များမူဘောင် (CMIS): ဒါဟာစုဝေးအိုင်တီအခြေခံအုတ်မြစ်စွမ်းရည်, အသုံးပြုခြင်းနှင့်သေဒဏ်စီရင်အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အနည်းဆုံး databases ကိုအတွက်ပယ်ရှား၏။
Accessibility စီမံခန့်ခွဲမှုသတင်းအချက်အလက်များမူဘောင် (Amis): ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒေသများရှိပယ်ရှားအားလုံးရနိုင်သောစီမံခန့်ခွဲမှုအချက်အလက်များ၏က virtual Vault ဖြစ်ပါတယ်။
လူသိများအမှားဒေတာဘေ့စ (KEDB): တစ်ဦးကလူသိများအမှားတစ်ခုမှတ်တမ်းတင်ထားသောအဓိကဒရိုင်ဘာနှင့်အလုပ်န်းကျင်နဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလူသိများအမှားရဲ့သိမ်မွေ့ဒြပ်စင်တစ်ခု Known အမှားဒေတာဘေ့စတှငျမှတျတမျးတငျထားသနေကြသည်။
ဒါဟာ base.Checkout သူတို့ရဲ့အသိပညာတိုးအဆိုပါရှာကြံလူတွေမာစတာဆရာ, ဆရာမနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရနိုင်အောင် ITIL လေ့ကျင့်ရေးကိုသှားဖို့သတ်မှတ်ထားသည့်ဤလိုင်းများတလျှောက်ဖြစ်ပါတယ် ITIL လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးပွုလုပျခွငျးမှနောက်ဆက်တွဲအလုပ်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများ။
ခြောက် Sigma သို့မဟုတ် ITIL ပိုကောင်းဘယ်ဟာပါလဲ? ခြားနားချက်ကဘာလဲ?